Maktabadda Your Lugood ahayn ma aha database a of music iyo playlists in aad abuuray. Warbixin gaar ah waxa lagu kaydiyaa ku fayl Lugood Media. Marka aad dib ama tirtirto galkan, Lugood abuuri doonaa cusub ah oo nuqul ka madhan marka codsiga la furay laakiin waxaa jira oo dhan fursad ah in playlists ah, ratings ee songs, comments iyo farshaxanka album laga yaabaa in lagu luminayo geedi socodkii.
Part1: Dhibaatooyinka in aad la kulmi kartaa marka resetting maktabadda Lugood ah
Part2: Sidee si ay u tagaan oo ku saabsan resetting Lugood aan khatarta ah ee laga badiyay playlists iyo macluumaad kale oo qiimo leh?
Part3: Habka ugu fudud oo degdeg inay dib maktabadda Lugood oo aan laga badinin metadata ama playlists.
Dadka ka yar tahay dareen ah in laga yaabo in ay helaan meel lagu kaydiyo qiimo badan marka ay cusboonaysiiso ay iDevice hadda si macruufka 8. dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ay waajihi karaan marka resetting waa:
Playlist music iyo ururinta heli kartaa wareersan. Ka dib markii resetting ah, waxa suurtagal ah in warbixin ku saabsan albums oo dhan iyo fannaaniin laga yaabaa in la waayey. Waxyaabo badan waxaa laga yaabaa in aad bilowday qalabka iyo albums qaar ka ciyaari karaa oo keliya ku raad ugu horeysay ee album ah iyo inta kale laga yaabaa in la maqan.
Lugood shil laga yaabaa in marka aad u hagaagsan in iDevice ah.
Waxaa laga yaabaa in dhibaato halkaas oo aad ka heli kartaa alaabta badan labalaabka.
Laga yaabaa in aadan awoodin in ay hagaagsan tahay album aad iDevice si sax ah.
Dhibaatada kale ee caadiga ah wajahay waa in Lugood waxay u egtahay uga istaagi ku yidhi ku sugayaan waxyaabaha in aad nuqulka 'iyo `sugaya isbedel in la sameeyo' talaabooyinka. Users laga yaabaa inaad sugto muddo saacado ah halkan.
Dadka qaar ayaa waxaa ku adkaatay markii lagu casriyeeyo si macruufka 8 sida, ma ay awoodaan in ay u hagaagsan files leh Lugood xaaladahan hab Wi-Fi.
Si aad u bilaabaan oo leh,
Waxaad u baahnaan doontaa inaad buuxiso gurmad ah maktabadda music si ay disk dadkoo taxan baska ama baabuur ah oo adag, oo dibadda
Dhoofinta playlists u XML qaab files oo waxaan iyaga ku badbaadin.
Fur Lugood iyo abuuraan maktabad cusub.
Add this maktabad cusub si iCloud dhex Lugood Kulanka oo sug habka dhammayn.
Dooro `Update Lugood Match 'ka bar menu ee Lugood iyo tirtirto 999 songs waqti. Ha ka badnaan tiro in. Waxa aad ku celin kartaa tallaabooyinka ilaa maktabadda madhnaado.
Kadib markii geedi socodka la dhammeeyo, tirtirto dhammaan playlists ee maktabadda maran Lugood.
Marka aad dib u cusboonaysiiso ama playlists in Lugood ah, waxaa jira fursad ah in aad ku dhammaan karaan inay la tirtiro playlists qaar ka mid ah si qalad ah. Waxaad dib karo iyo soo celiyo iyadoo la bedelayo Lugood Library.itl la file ah oo ka weyn. Haddii aadan dib ama la casriyeeyay maktabadda markii qaar ka mid ah, ka dibna waxaa laga yaabaa in aadan heli playlist tirtiray in Lugood oo dhan. Halkan qalab ugu fiican waa in la soo celiyo playlists ka iPod, mobiilka iPhone ama iPads la
Qalabkani waxa uu awood badan u suurtogelin doonaa in aad dib iyo soo celinta playlists on Lugood iyo waxaad awoodi doontaa inaad si ay u gudbiyaan liisaska ka dhan iDevices haddii aad awoodin in ay u hagaagsan playlists ku Lugood hor inta aadan u tirtiray.
Si aad u bilowdo hawsha,
Connect qalab macruufka ah ee la your computer.
Download iyo rakibi TunesGo on your computer.
Connect qalab macruufka ah ee la playlists aad kombuutarka iyo abuurtaan TunesGo. Waxaa si toos ah loo ogaado doonaa qalab gaar ah oo wuxuu muujin doonaa in uu furmo suuqa hoose dhammaan macluumaadka aasaasiga ah. TunesGo taageeraa oo dhan iPhone 5 lagu daydo, daydo iPad Minis iyo iPod Touch.
Waxaad awoodi doontaa in aad u aragto playlists bidixda ee suuqa hoose.
Riix iyaga on ay u fiiriyaan category dhameystiran.
Dooro liiska aad rabto iyo guji saddexagalka, `dhoofiyo 'iyo dooran` dhoofiyo Lugood Library'. Bar horumarka ayaa hayn doona aad updated on dib ugu.
Dib u soo celinta ee Lugood iyo resetting noqon doonaa dhamaystiran sidan oo waxaad eegi kartaa playlist mar loo sameeyo. The ratings agabka iyo play ku soo oogay doonaa oo dhan lagu wareejiyo Lugood by default ka qalabka macruufka.
> Resource > Lugood > Sida loo joojiyo oo maktabadda Lugood oo aan laga badinin metadata ama playlists